काम र क्यारियर | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: काम र करियर
टाउको सहायक: कर्तव्यहरू र व्यक्तिगत गुणहरू
प्रबन्धकको व्यक्तिगत सहायक एक पेशा हो जुन यस समयमा उच्च मागमा छ। सबै भन्दा पहिले, यो एक बजार अर्थव्यवस्था को विकास संग जोडिएको छ, कडा प्रतिस्पर्धा को अवस्था मा, कुनै पनि कम्पनी को वित्तीय अवस्था निर्भर गर्दछ ...
स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली ईन्जिनियर: स्वचालित प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली ईन्जिनियर को कर्तव्यों
एक स्वचालित प्रक्रिया नियन्त्रण प्रणाली ईन्जिनियरले के गर्छ? यस लेखमा यसबारे छलफल गरिनेछ। पेशे को बारे मा तपाइँ कसरी संक्षिप्त मा पेशा वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ? एक ACS TP ईन्जिनियर एक व्यक्ति हो जो ...
भोजनालय प्रबन्धक: जिम्मेवार, जिम्मेवारी। रेस्टुरेन्ट कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
प्रकाशित 15.09.2019 21.11.2019
एउटा रेस्टुराँ यस्तो स्थान हो जहाँ मानिसहरू आराम गर्न जान्छन्, जहाँ तिनीहरू आराम गर्न सक्छन्, स्वादिलो ​​स्वादिष्ट खाना स्वाद लिन सक्छन्, राम्रो संगीत सुन्नेछन्। तर केहि को लागी, एक रेस्टुरेन्ट एक काम हो। र रेस्टुरेन्ट प्रबन्धक - ...
वन फेलर: आवश्यकताहरू, कामका सुविधाहरू
फेलर एक पेशा हो कि मात्र वास्तविक मानिस मास्टर गर्न सक्छन्। यो कामका लागि उल्लेखनीय शारीरिक बल र सम्मानित कौशल आवश्यक छ। र यदि केटालाई पहिलो संग विशेष कठिनाइ छ ...
के हुन्छ जीवनमा? कसरी सही छनौट गर्ने?
कसले तिनीहरूको जीवनमा कहिल्यै प्रश्नहरू सोधेका छैनन्: “भविष्यमा को हुने होला? कुन पेशा रोज्ने? " हामी सोच्छौं कि यो सजिलो छ। कोहीले दावी गरे कि तिनीहरू डिजाइनरहरू, अरुहरू - डाक्टरहरू, ...
रासायनिक पानी शुद्ध: कार्य विवरण, प्रशिक्षण सुविधाहरू र समीक्षा
हीट पावर ईन्जिनियरि always जहिले पनि सबैभन्दा आवश्यक र मांग गरिएको कार्य क्षेत्रहरू मध्ये एक भएको छ। यसैले एक रासायनिक पानी उपचार अपरेटर को पेशा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस कार्यका सबै subtleties र सुविधाहरू थप छलफल हुनेछ। Who…
चुम्बकमा काम गर्नुहोस्: समीक्षा र विचारहरू
यसका बारे केही पनि जानेन बिना काम प्राप्त गर्न हतार नगर्नुहोस्। भाग्यवस, अब यो गर्न यो धेरै सजिलो छ, इन्टरनेट र शोक साझा गर्न वा सत्यलाई "डम्प" गर्ने मानवीय इच्छाको लागि धन्यवाद। उदाहरण को लागी,…
प्रभारी चालक। पेशे विवरण, वेतन
धेरै देशहरूमा चालकको पेशा सबैभन्दा धेरै माग गरिएको हो। यातायात पूर्वाधारको विकासले ड्राइभरहरूको आवश्यकताहरू र उनीहरूको व्यावसायिक गुणहरू बढाउँदछ। यस पेशे को छनोट को लागी खर्च गर्न को लागी इच्छुकता ...
घुमाउने कार्य विधि (सिफ्ट)। "Stakhanov": एक घुमाउने आधार मा काम प्रदान रोजगारदाता को समीक्षा
एक समयमा जब रोजगारहरू पाउन गाह्रो हुन्छ, धेरै पेशागतहरूले वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरूको अन्वेषण गरिरहेका छन्। शारीरिक बल र सहनशीलताका साथ पुरुष र महिलाहरू रिक्त स्थानहरूमा बढि रुचि राख्दछन् जुन घुमाउने कार्य विधिको लागि प्रदान गर्दछ। सर्तहरू जुन ...
स्पेलोलोजिष्ट को हो? केभरले के गर्छ? एक स्पेलियोलोजिष्ट के अध्ययन गर्छ?
स्पेलोलोजिष्ट को हो? एक धेरै नै खतरनाक र उपयोगी व्यवसायहरूको नाम सुनेका धेरै व्यक्तिहरूमा यस्तै प्रश्न उठ्छ। कुरा यो हो कि यो सब भन्दा साधारण काम होईन, वास्तविक ...
भर्ती हो ... स्थितिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूलाई आकर्षित गर्ने तरिकाहरू र विधिहरू
भर्ती अमेरिकी अंग्रेजीबाट व्युत्पन्न "भाडामा लिनु" का पर्यायवाची शब्द हो। यो शब्दले स्थायी वा अस्थायी कामको लागि उपयुक्त रोजगारीका उम्मेदवारहरूलाई आकर्षित गर्ने, छनौट गर्ने र अनुमोदन गर्ने सामान्य प्रक्रियालाई जनाउँछ ...
आकर्षक काम: "प्याकर"। यो त्यति सजिलो छैन ...
"प्याकरको रूपमा काम खोज्दै हुनुहुन्छ" - त्यस्ता विज्ञापनहरू विरलै पाइन्छन्, किनकि त्यो नामको कुनै व्यवसाय छैन। खाद्य उद्यमहरू, र केही गोदामहरू, र कारखानाहरू उत्पादन ...
सुशासन हो .... "गवर्नेन्स" शब्दको अर्थ। शासकको काम के हो?
जब तपाइँ "गवर्नेस" शब्द पढ्नुहुन्छ वा सुन्नुहुन्छ, तब प्रत्येक व्यक्तिको केही निश्चित सम्बन्ध हुन्छ। मलाई थाहा छैन कसैसँग यो कसरी छ, तर मेरो लागि शासक हो, सर्वप्रथम, मेरीको साहित्यिक छविहरू ...
रूसमा सैन्य पेशा
रूसी संघको सशस्त्र बलमा हालसालै गरिएको सुधारका लागि धन्यवाद, त्यस देशमा सेनाको भूमिका धेरै बढेको छ। अब सैन्य पेशा एक मानद उपाधि र सभ्य तलब मात्र होईन, तर ...
नयाँ प्रविधि 21 शताब्दी। 21 शताब्दीमा सबैभन्दा धेरै खोजी पछि व्यवसायहरू
किन नयाँ पेशाहरू देखा पर्दै छन्? किनभने नयाँ क्षेत्रहरू दुबै शब्दको शाब्दिक अर्थमा र प्रतीकात्मक रूपमा विकसित भइरहेका छन्। व्यक्ति पूर्ण रूपमा भिन्न चीजमा रुचि राख्न थाल्छ, सृजनात्मकताको लागि अन्य क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नुहोस् र, ...
कार्यकारी निर्देशक। अधिकार र अधिकार
सीईओ स्थिति विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न कम्पनीहरूमा बढ्दो सामान्य छ। जब यो खाली स्थानको लागि आवेदन दिईन्छ, तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ कि यस कर्मचारीको के जिम्मेवारी र अधिकारहरू छन्। कार्यकारी निर्देशकका कार्यहरू बहुमुखी छन् ...
तपाई पोर्टफोलियो को लागि एक निबंध बालबालिका शिक्षक को आवश्यकता छ?
केही समय पहिले, पूर्वस्कूल शैक्षिक संस्था (DOW) का कर्मचारीहरूको प्रमाणीकरणका लागि नयाँ मानकहरू अपनाइएको थियो। आयोजित पदको साथ पेशेवर अनुपालनको पुष्टि गर्ने कागजातहरूको अतिरिक्त, बालवाडी शिक्षकका लागि निबन्ध पनि तयार गर्नु आवश्यक छ। एक पोर्टफोलियो को लागी, यो छ ...
मेकानिक भनेको के हो? प्रोफेशन अवलोकन
मेकानिक भनेको के हो? यस्तो लाग्दछ कि यो एकदम साधारण पेशा हो, कुनै कुरा जटिल छैन। तर थोरैलाई बुझ्नु आवश्यक छ, र यो तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ - सबैले यसलाई मास्टर गर्न सक्षम छैनन्। सबै पछि, यो विशेषज्ञ राख्छ ...
दर्जी एक रचनात्मक पेशाको एक व्यक्ति हो
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि सूट फिगरसँग मिल्छ यदि यो राम्रोसँग सिलाई गरीएको छ भने। धेरै व्यक्ति एक ateiler मा दर्जी टेलरिंग गर्न रुचाउँछन्। सबै प्रकारका तयार वस्तुहरूका साथ, तपाइँ जहिले पनि केही चाहानुहुन्छ ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 122 अर्को पाना
67 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,916 प्रश्नहरू।